Kismaayo: “Sida ay hadda wax u socdaan, waxa ay u badan tahay in la isku raaci doono habka…” | Caasimada Online
Home Warar Kismaayo: “Sida ay hadda wax u socdaan, waxa ay u badan tahay...
Kismaayo: “Sida ay hadda wax u socdaan, waxa ay u badan tahay in la isku raaci doono habka…”
Kismaayo (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Iidle Geedi Xerow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegay in loo badan yahay xubnaha madasha Wadatashiga qaran ay isku raacaan in la qaato nidaamka 4.5.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shirka uu xalay bur-buray, balse madaxda Soomaalida ay mar kale isku soo celisay beesha caalamka.
Waxa uu sheegay in qaabka hadda ay wax uga socdaan magaalada Kismaayo ay u muuqato mid laga tallaabayo hab deegaan.
“Weli shirka waa uu socdaa go’aan lagama gaarin laakiinse waxaa loo badan yahay in lagu heshiin doono habka 4.5, qaab deegaan ma filayo inkastoo weli go’aan la gaarin laakiinse qaabka qabiilka ayaa xooggan” ayuu yiri xildhibaanka.
Xildhibaanka ayaa sheegay hadii ay dhacdo in lagu heshiiyo 4.5 in hadana la’is weydiin doono qaabka uu noqonayo habkaasi iyo cidda soo xuli doonta xildhibaannada iyo arrimo kale.
Shirka madasha Wadatashiga qaran ayaa maanta la filayaa in lagu soo gabogabeeyo magaalada Kismaayo, iyadoona qorshuhu yahay in la’isku raaco qorshe lagu dooran doono nooca doorasho ee sanadkaan 2016-ka.